lulu: For Ma Ma Lu
For Ma Ma Lu
at 8:12 PM Labels: Party
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာပြီး
Andy Myint August 14, 2008 at 9:59 AM
Happy Birthday မလုလု။ မွေးနေ့မှာ စပယ်ရှယ် တစ်ခုခု ချက်ကျွေးမယ် ထင်တယ်။
မြရွက်ဝေ August 14, 2008 at 10:31 AM
お誕生日おめでとう(ノ ^ ▽ ＾ )ノ‥‥━━━━━☆ピーー
. August 14, 2008 at 11:01 AM
Happy Birthday.....Ma Ma Lu :-)
j3w3l @ pan nwe
ထွန်း August 14, 2008 at 12:20 PM
မွေးနေ့ မှသည် သက်ဆုံးတိုင်သို့အောင်မြင်မှု့ မင်္ဂလာ အပေါင်းနဲ့လိုရာဆန္ဒပြည့်ဝပါစေ.
လုလု August 14, 2008 at 6:39 PM
မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ကိုအင်န်ဒီရော၊ ရွက်ဝေ၊ ပန်းနွယ်၊ ဂျေ၊ ညီမလေးခင်တို့နဲ့တကွ မောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ :-*
nu-san August 14, 2008 at 9:26 PM
ဟိ..ဟိ..နောက်ကျသွားတယ် မလုရေ.. Happy Birthday ပါ ... မွေးနေ့အတွက် အထူးစပါရှယ် ဟင်းချက်ကျွေးပါဦး.. :D
Opera Tun August 15, 2008 at 11:53 PM
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်မူ့ အပြည့် ရပါစေ မမလု ... မမလု မောင်လေးကို မေ့မထားနဲ့နော်...
မမလု ကို သတိရရင် ကိုကလေးလေးကိုပါ ရောပြီး သတိရတယ်.. အဲတစ်ယောက် ဘယ်များ ရောက်နေလဲ မသိဘူး... မမလုကို အဆက်အသွယ်လုပ်လား... အချိန်တွေက ပြောင်းလဲ လွန်းတယ်... သံယောဇဉ်တွေက တွယ်ငြိမ့်လွန်းတယ်... ဘ၀ဆိုတာ မလွယ်ပါလား မလုရာ...
လုလု August 16, 2008 at 10:13 AM
မနုစံရေ့့့ မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ့့့်  မွေးနေ့မှာ ဆုမွန်ခြွေပေးကြတဲ့ ၀ိုင်းတော်သားများနဲ့ ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်တယ့့့်  ရင်ထဲမှာလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနွေးနွေးထွေးထွေးကို ခံစားရပါတယ်။
အော်ပလာရေ့့ ငါ နင့်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူးဟယ့့့် နင်င့ါကို ကူညီခဲ့တာတွေကိုလည်း ငါလုံးဝမမေ့ဘူ့း့့  ဗုံးပေါက်တဲ့နေ့က ငါကြောက်နေလို့ နင်ငါ့ကို လမ်းကြုံလိုက်ပြီး အိမ်အပြန်လိုက်ပို့တာလည်း ငါတစ်သက်မမေ့ပါဘူးဟယ့့့် ငါတို့မောင်နှမတွေ ရသာကြေးအိုးမှာ စားကြတာတွေလည်း မမေ့ဘူ့း့့  ဟိုကောင် ကလေးလေး (သာဂိ) တို့လည်း ဘယ်ရောက်ကုန်လဲမသိဘူ့း့့  သင်းငါ့ကိုတွေ့ရင် ဂျပုမလို့ အရင်ခေါ်ဦးမယ်ထင်တယ့့့်  နင်လည်း အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်။ ငါ့မွေးနေ့မှာ ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ။
ခင်မင်းဇော် August 16, 2008 at 1:20 PM
စားဖိုကဲကြီး လုလုရဲ့ မွေးနေ့ကို ဒီနေ့မှ ရောက်ဖြစ်တယ်။။ အသက်ရာကျော်ရှည်လို့ ဟင်းတွေများများချက် မုန့်တွေများများလုပ်ကျွေးနိုင်ပါစေ။
(ဒီဘလော့ဖတ်ပြီး မုန့်တွေ လုပ်စားဖြစ်တယ်)
ရွှေဂျမ်း August 18, 2008 at 11:32 AM
မွေးနေ့ကို ရောက်တာ နောက်ကျသွားတယ် အမရေ။ မွေးနေ့မှစလို့ နှစ်ပေါင်းရာကျော်တိုင် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာပါစေ။ ညီမတို့ကိုလည်း ဒီထက်များများ ပိုချက်ကျွေးနိုင်ပါစေနော်။ များများချက်ကျွေးနိုင်ဖို့ လူတိုင်းက ၀ိုင်းဆုတောင်းပေးနေကြတယ် အမရေ။ :D
လုလု August 20, 2008 at 6:12 PM
မမခင်မင်းဇော်နဲ့ ညီမလေး ရွှေဂျမ်းရေ့့့  မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်။
လုလု တတ်သမျှ မှတ်သမျှလေး ချက်ထားတာကို အားပေးကြတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။
နောက်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ချက်ကျွေးပါဦးမယ်နော်။